Farmajo iyo Shirkii Carabta; UAE iyo Somaliya; Xog Kooban. | Muqdisho Online
Home Af Soomaali Farmajo iyo Shirkii Carabta; UAE iyo Somaliya; Xog Kooban.
Ilaa iyo intii mooshinkii Jawaari lagu ridayey ay madaxtooyada iyo golaha wasiiradda iska kaashadeen uu dalka ka dhacay, kaas oo ka dhashay go’aankii Barlamanka ee tuurista heshiiskii khaldanaa ee Berbera DP world ayaa waxaa maalin walba halis sii galayey hogaaminta iyo magaca dalka.
Dalka Imaaraadka oo ahaa dal Somaliya aad ugu dhowaa marka laga fiiriyo dhinacyo badan ayaa waxaa sii xumaanayey xiriirka aynu leenahay ilaa iyo intii dawladdaan hogaanka dalka qabatay.
Marka la fiiriyo waxay muujinayaan tallaabooyin is xigxigay oo badankood aysan xataa xukuumadda isku raacsanreyn ee Imaraadka lagula kacay iyo la safashadii dalka Qater waxaan ka dhaxalnay maxsuul xun oo noo keeni kara inay dawladimadeenna dhaawacanto.
1. Waxaa Fahad iyo Kheyre ay xoog ku qaateen lacag lagu keenay dayuurad khaas ah oo ay boqortooyada Imaaraadkka Soo dirtay, lacagtaas oo la lahaa waxay u socotay mushaahar ciidanka ay Imaaraadka noo tababaraan. Waxaasa jira warar kala duwan oo sheegaya inay u socotay hawllo kale oo qarsoon. Waxaana la ogeyn halka ay martay walow naloo sheegay in Bangiga dhexe lagu xareeyey.
2. Iyadoo taas sii qoyan tahay ayaa dayuurad ay Imaaraadka leeyihiin lagu xannibay garoonka dayuuradaha ee magaalada Boosaaso, kadib markii la sheegay inay siday waxyaabo ay aysan dawladda Somaliyeed raali ka ahyn. Waxaa la sheegay inay dayuuradda u timid inay qaado saraakiil tababarayaal ahaa oo Imaraadka iyo wax kale oo qolaba si u sheegtay, hasa yeeshee muddo ka bacdi waa la sii daayey dayuuraddii waxayna u duushay dalkeedii. Waxaysa la tagtay caro iyo xanaaq la hubo inay dib noogu soo noqon doonaan.
3. Wasiirka Gaashaan dhigga ee Dawladda Fderaalka ayaa isna sheegay inaan Imaaraadka looga baahneyn hada kadib inay bixiso mushaarooyinkii ciidanka ay ee ay bixin jirtay ee 2000+ ahaa, xiriir ay horay dawladda Somaliya iyo Tan imaaraadka u wada galeenna ay Somalida dhankooda ka baxeen.
4. MW Farmajo isna aaday shirkii Jamacadda Carabta oo sacuudiga lagu qabtay, hasa yeehsee waxa la sheegay inuusan kala kulmin soo dhoweyn oo cid waliba ay ka jeesatay, xataa khudbaddiisii waxaa la iska geliyey galka khudbadaha lagu ururiyo marka la akhriyo hasa yeshee tiisa lama akhrin. Waxayna wararka sheegayaan in waddamada qaar ay diideen inay dhageystaan hadalkiisa maadaama uu la saftay Qatar markii ay khaliijka isku dhaceen.
5. Warar Muqdisho la isla dhexmarayey ayaa sheegayey in la bililiqeystay xeradii ciidnka Imaaraadka ay wax ku tababari jireen kadib markii uu xerada oo ay isaga tageen tabababarayaasha uu booqday Abaanduulaha CXD, Hasa yeshee war ka soo baxay Taliska CXD ayaa sheegay inay been tahay oo aysan jirin wax bililiqo ah oo xearada ka dhacay iyo inuu xerada Booqday abaanduulaha CXD General oo Caanood oo la leeyahay waxay bililiqadu dhacday kadib markii uu isaga halkaas tagay.
Isu soo duub xaaladda dalka waxay maalinba maalinata ka dambeysaa sii galaeysaa halis. Barlamanka Gudoomiye Ma leh, lamana yaqaan sababtii loo riday guddoomiye Jawaari. Imaaradka waa lala dagaalay iyadoon la ogeyn waxa laga fa’iidayo. Mdaxweynihii waxa uu aaday shir uusan ka fiirsan qaabiladda uu helayo oo la leeyahay waxaa loola dhaqmay si uusan mudeyn. Ammaanka caasimadda faraha ayuu ka baxay oo cid walia waxay ku joogtaa cabsi. Hadda oo aan qoraalkan sameynayo xaffdeenna waxaa lagu toogtay nin dhallinyaro ah oo ganacsade ahaa. Waxaa ka horreeyey Maccalin Jaamacadeed. Haddaba xagee wa ku socdaan.
Ma waxaa la diyaaranayaa xaalad xukunka uu gacanta u galo koox gaar ah sida Ictizaam (Fahad, Caanood , Farmajo, Sh Bashiir) misa waxaa soo socda inqilaab milateri oo uu Farmajo diyaarsaday. Waa cajiib cabsi leh.
Previous articleWaa Maxaa Sababta Dhabta ah ee ka Dambeysay Is Casilaadda Jawaari (Maxaadan ogeyn oo dhacay. Xog sir ah)
Next articleBerbera waxaa lagu Bixinayaa Heshiis horay loo Saxeexay sidii kii lagu Dhiibay Qalbidhagax. Yaab!
Mahad - February 16, 2018
US military says drone strike kills 4 militants
Mahad - February 23, 2018
Mahad - March 15, 2018
Madaxweyne Farmaajo iyo RW Kheyre oo isku qalaafsan in xiriirka loo...